Pep Guardiola Oo Diiday Inuu Dhaqso Ku Soo Laabto Sergio Aguero
HomeHoryaalka IngiriiskaPep Guardiola oo diiday inuu dhaqso ku soo laabto Sergio Aguero
Tababaraha Manchester City Pep Guardiola ayaa carabka ku adkeeyay inuusan ku dag dagi doonin inuu ku soo laabto garoomada Sergio Aguero .
Gooldhaliyaha ugu goolasha badan City ayaa ahaa bedel aan la isticmaalin kulankii sabtida ee Premier League ee ay guuldarada kala kulmeen Tottenham madaama uu ku dhow yahay inuu ka soo laabto dhibaatadii dhaawac ee ugu dambeysay.
32 jirkaan ayaa seegay dhamaadka xilli ciyaareedkii hore iyo bilowgii ololaha haatan ka dib qaliin jilibka ah bishii June. Waxa uu tan iyo markii uu ku maqnaa dhaawac kale ka dib dhaawac muruqa ah bishii hore.
Guardiola ayaa yiri: “Waxaan dooneynaa inuu mar kale ku soo laabto tababarka si uu ugu soo kabsado dhaawaca jilibka tani waa waxa ugu muhiimsan.
City ayaa u safreysa Greece Talaadada ka hor kulankooda Champions League ee Group C ee Arbacada ka dhacaya Olympiacos . Ka dib markii ay guuleystaan ​​seddexdooda kulan ee furitaanka tartanka xilli ciyaareedkan, guushu waxay xaqiijin doontaa booskooda wareega 16ka.
Guusha ayaa sidoo kale kor u qaadi doonta kooxda ka dib bilow xun oo ay ku bilaabatay Premier League oo ay dhibco hoos uga dhacday shan ka mid ah sideedii kulan.